Nosamborina Noho Ny Fahatratrana Rongony Teny Aminy Ilay Mpikatroka Toniziana Azyz Amami · Global Voices teny Malagasy
Nosamborina Noho Ny Fahatratrana Rongony Teny Aminy Ilay Mpikatroka Toniziana Azyz Amami
MpanoratraWafa Ben Hassine
Voadika ny 16 Mey 2014 16:36 GMT
Vakio amin'ny teny Español, বাংলা, Français, English
Mpanohana an'i Amami nandritra ny sit-in. Sary navoakan'i @awicksell tao amin'ny Twitter.
Nosamborina omaly alina teo amin'ny 11 ora teo tao La Goulette ilay bilaogera Toniziana sady mpikatroka momba ny zon'Olombelona Azyz Amami noho izy nahatratrana rongony 700 grama teny aminy. Nodarohan'ireo polisy nisambotra azy i Amami, araka ny nambaran'ny rainy. Nosamborina niaraka taminy ihany koa ny namany, Sabri Ben Mlouka. Mety hiatrika sazy iray hatramin'ny dimy taona izy roalahy ireto, sazy henjana indrindra noho ny fampiasàna rongony
Notànana ao amin'ny tobin'ny polisy ao Carthage i Amami amin'izao fotoana izao. Amin'ny Alakamisy 15 Mey manomboka amin'ny 9 ora ny fotoa-pitsarana azy voalohany. Nandà ireo fiampangana azy izy, ary nandà hanasonia antontan-taratasy.
Nisy ny fihetsiketseham-panohanana an'i Amami notontosaina tamin'ny 13 Mey tao afovoan-tanànan'i Tunis
Iray amin'ireo mpiaro mafana fò an'ny fianakavian'ireo martiora namoy ny ainy sy nitondra takaitra nandritra ny fitroarana 2010-2011 i Amami, ary mitolona hoan'ny zon'izy ireo. Nogadraina izy tamin'ny 6 Janoary 2011 ary nampahoriana ara-tsaina amam-panahy sy ara-batana tamin'izy notànana tao amin'ny minisiteran'ny Atitany. Mibilaogy manohitra ireo fanararaotana ataon'ny fanjakana sy ny herisetra ataon'ny polisy i Amami nanomboka tamin'ny taona 2008, ary niasa miaraka amin'ireo mpikatroka miaro ny aterineto sasany manana ny lazany indrindra ao Tonizia izy tamin'ny fanentanana Ammar 404 ho fitakiana ny fampitsaharana ny fanarahamaso sy ny sivana ataon'ny fanjakana. Matetika izy lohalaharana amin'ireo hetsika hoan'ny rariny ara-tsosialy ao Tonizia, ary sokajian'ny maro ho sariohatry ny revolisiona.
Efa fanao mahazatra ny fiampangana lainga milaza fahatratrarana rongony izay nampiasan'ireo manampahefana Toniziana hatrany taloha sy taorian'ny fitroarana mba hanafenana fa fisamboarana politika no tena misy.
Nikarakara sit-in tao amin'ny trano teatraly Al-Hamra, ao amin'ny faribohitr'i Tunis ireo naman’ Azyz, izay nahitana sy nandrenesana tenim-panohanana sy firaisankina hoan'ny rain'i Azyz, ireo mpisolovava sy ny mpanohana.
Tantaran'ny Tonizia farany
20 Mey 2020Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana
27 Avrily 2020Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana